Madaxweynaha Jabuuti: Waan sii xoojineynaa dagaalka ka dhanka ah Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Jabuuti: Waan sii xoojineynaa dagaalka ka dhanka ah Alshabaab
A warsame 21 March 2014 4 April 2019
Jabuuti – Mareeg.com: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay inuusan saameyn ku yeelan doonin weerar is-qarxin ah oo Alshabaab dhawaan ciidamada dalkaas kula beegsadeen degmada Buulo-barde ee gobolka Hiiraan.
Mr. Geelle ayaa hadalkaan jeediyey kadib markii xaly Jabuuti la gaarsiiyey ilaa 6 ka mid ah ciidamada Jabuuti eek u dhintay weerar is-qarxin oo Isniintii lasoo dhaafay Alshabaab ku qaadday degmada Buulo-barde ee gobolka Hiiraan.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa sheegay inay ka go’an tahay inay la dagaalamaan Al-shabaab, kuwaasoo uu ku tilmaamay argagaxiso.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shacabka Jabuuti uga tacsiyeeyay askartii uga geeriyootay magaalada Buulabarde, isagoo tilmaamay iney gudanayeen waajib qaran oo ay cadowga ka difaacayeen walaalahooda Soomaaliyeed.
Geelle ayaa ku timaamay askarta ka dhimatay inay ahaayeen geesiyaal ku dhintay meeshii ugu wanaagsanayd ee ay ku dhiman lahaayeen, isagoo xusay inay yihiin shuhaddo dhintay iyagoo shacabka Soomaaliyeed ka celinaya wuxuu ugu yeeray argagaxisada Soomaaliya.
Ismaaciil Cumar Geelle ayaa bilado ku tixay meydadka lix askari Jabuutiyaan oo xalay la geeyay Jabuuti, isagoo ciidankiisa ku sugan Soomaaliya ugu baaqay inay sii wadayaan howl galka ka dhanka ah Al-Shabaab.
“Askartii Hiil walaal ee Jabuuti ka socday waxay naftooda u hureen iyagoo gudanaya waajib qaran oo ay cadawga ka difaacayeen walaalahooda Soomaaliyeed”ayuu yiri Ismaaciil Cumar Geelle.
Sidoo kale, madaxweynaha Jabuuti, ayaa sheegay inay sii xoojinayaan dagaallada ay kula jiraan Al-shabaab oo uu ku tilmaamay argagaxiso dhibaato ku haysa dadka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in dagaalku uu sii socon doono, ayna Soomaalida ka caawiyaan sidii ay uga hoos-bixi lahaayeen wuxuu ugu yeeray argagaxisada.
“Waxaan halkan ka sheegayaa inay ducadeenna, wax-siinteenna iyo wixii ay nooga baahdaan aan mar walba la garab-taagannahay ciidamadeenna ku sugan Somalia iyo kuwa aan u diri doonno si ay dalkaas nabad ugu soo dabaalaan,” ayuu mar kale yiri madaxweyne Geelle.
Ciidamada Jabuuti ee qeybta ah AMISOM, looguna yeero Hiil Walaal ayaa ku sugan magaalada Baledweyne iyo degmada Buulo-barde ee gobolka Hiiraan, waxaana intii ay joogeen Soomaaliya oo ka badan sanad ka geeriyooday ilaa 9 askari.
Soomaaliya iyo Ururka Caalamiga ah ee Shaqada (ILO) oo kala saxiixday heshiis
Wasaaradda arrimaha gudaha: Ahlusuna ciidamo ma lahan bilo ka hor ayay dowladda ku biireen